Macallin Frank Lampard oo ka hadlay fursadda ay Chelsea ku hanan karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan – Gool FM
Macallin Frank Lampard oo ka hadlay fursadda ay Chelsea ku hanan karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan
(London) 20 Dis 2020. Macallinka hoggaamiya kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa kooxdiisa la barbar dhigay hab ciyaareedkii Liverpool ee xilli ciyaareedkii hore, iyo midkii Manchester City ee ka sii horreeyay, waxaana uu tibaaxay inaysan labadaas naadiba ku heer ahayn xilligan.
Sidaas darteed, Lampard ayaa hoos u dhigay fursadda ay ku hanan karaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan isagoo u sababeeyay kooxo badan oo ku tartamaya horyaalka, iyo inaysan u dagaallami karin sidii ay sameeyeen Reds iyo Man City labadii fasal ciyaareed ee la soo dhaafay.
Chelsea ayaa ka mid ahayd kooxaha loo saadaalinayay hanashada horyaalka Ingiriiska sanad-ciyaareedkan ka hor inta aysan la kulmin labo guuldarro oo xiriir ah, waxaana ay u dhaadhaceen booska siddeedaad ee kala sarreynta horyaalka xilli ay sagaal dhibcood ka dambeeyaan hoggaamiyaasha Liverpool.
Frank Lampard ayaa kahor kulanka West Ham oo ay habeen dambe la balansan yihiin u sheegay warbaahinta:
“Xaqiiqada hadda jirta ayaa ah inaan annagu ahayn Liverpool-shii sanadkii hore, ama Manchester City-dii sanadkii ka sii horreeyay, kuwaasoo guuleysanayay, guuleysanayay haddana guuleysanayay.”
Macallinka Chelsea ayaa intaas sii raaciyay inay hadda kooxdiisa ku jirto kobac iyo inay u bislaato hanashada horyaalka, taasna ay qasab ka dhigeyso inay wajahaan xaalado adag.
Blues ayaa fiidnimada Isniinta soo dhoweyn doonta naadiga London kala dhisan ee West Ham, waxaana ay dooneysaa inay waddada guulaha ku soo laabato kaddib guuldarrooyin xiriir ahaa oo ka soo gaaray Everton iyo Wolves.
ISKA ILLOW AUBAMEYANG, Barcelona oo bartilmaameed ka dhiganaysa xiddig kale oo ka tirsan Arsenal
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Manchester United iyo Leeds United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey